बलिउडका कलाकार बिजनेसको दुनियाँमा पनि छन् सुपरस्टार – Puleso
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ बलिउडका कलाकार बिजनेसको दुनियाँमा पनि छन् सुपरस्टार
बलिउडका कलाकार बिजनेसको दुनियाँमा पनि छन् सुपरस्टार
पुलेसो १६ माघ, २०७७, शुक्रबार १४:५१
बलिउडमा प्रवेश गर्ने वित्तिकै एक–दुई हिट फिल्म हातमा लग्यो भने सम्झनुहोस् भाग्य चम्कियो । बलिउडमा महिनाको हरेक दोस्रो र चौथो शुक्रबार फिल्म रिलिज हुन्छन् । तर, तीन फिल्म कति हिट हुन्छन र कति फ्लप पनि ।
बलिउडमा प्रवेश गर्नेहरुलाई अर्को एउटा डर पनि हुन्छ । फिल्म लगातार फ्लप भएर हातमा फिल्म आउन छोडे भने आम्दानी बन्द हुने डर उनीहरुलाई हुन्छ ।
यही अवस्थामा बलिउडका यी स्टार अभिनयको दोकानका साथै बिजनेसमा पनि सक्रिय छन् । उनीहरु फिल्मको पर्दामा मात्र होइन बिजनेसमा पनि हिट छन् ।
फिल्मका अलवा शारुखको आफ्नै प्रोडक्शन हाउस समेत छ । जो फिल्म बनाउने काम गर्छ । यसका साथै उनी आइपीएलमा कोलकत्ता नाइट राइडरका समेत मालिक हुन् ।
त्यसो त सलमान आफैमा एक ब्राण्ड हुन् । तर, उनको पनि एक ब्राण्ड छ । त्यो ब्राण्डको नाम हो ह्युमन बिङ । च्यारेटीका लागि शुरु गरिएको यो ब्राण्डको दायरा विस्तारै बढ्न थाल्यो । अहिले भारतभरी यसको रिटेल स्टोर छ । ई–कर्मस वेवसाइटमा सलमानको ब्राण्ड हर विक्रिमा आफ्नो हिस्सा लिन्छ । सलमान यसको प्रमोशन जहाँ जतिखेर पनि गर्छन् । कुनै इभेन्टमा जानुपर्दा उनी यही ब्राण्डको लोगो अंकीत टिर्शट लगाउछन् ।
३. प्रीति जिन्टा
उनी बलिउडकी सबैभन्दा सफल बिजनेस वुमन हुन् । २००८ मा उनले आइपीएलमा किंग्स इलेवन पन्जाव किनेकी छन् । यसका साथै उनको एक प्रोडक्शन हाउस समेत छ । जुन मुम्बईबाट संचालित छ ।
४. सुष्मिता सेन
सुष्मिता पर्दामा भलै कम देखिन्छिन् । त्यसको कारण उनी आफ्नो बिजनेसमा धेरै व्यस्त हुन्छिन् । उनको दुबईमा एक ज्वेलरी छ । यसका साथै उनको प्रोडक्सन हाउस ‘तन्त्रा’ पछि छ । उनी मिस यूनिभर्सको प्रेन्चाइज एमसीको प्रमुख समेत हुन् ।
५. जोन अब्राहम
जोनको एक प्रोडक्शन हाउस छ । यसका साथै उनको एक जिम खान समेत छ । जुन भारतकै ठूलो जिमखाना भएको बताइन्छ ।
६. अजय देवगन
अजय फिल्ममा फोकस्ड गर्छन् । तर, उनको लगानी धेरै तिर छ । उनले रोहा ग्रुपमा लगानी गरेका छन् । यसका साथै गुजरातको सोला प्राजेक्टमा समेत उनको लगानी छ ।
७. करिश्मा कपूर
करिश्मा कपूर आफ्नो निजी जिवनको विषयमा केही दिन देखि चर्चामा छिन् । उनको दुरी फिल्मबाट बढेको छ । उनी एक ई कमर्श पोर्टलकी मालिक हुन् । यो पोर्टले माहिला र नवजात बच्चाहरुका लागि आवश्यक सामान बेच्ने गर्छ ।
८. सुनिल शेट्टी
सुनिल बलिउडका सफल बिजनेसम्यान हुन् । एक रेष्टुरेन्ट र प्रोडक्शन हाउसनका उनी मालिक हुन् । साथै सुनीलको बुटिक चेन मुम्बईमा चर्चित छ ।
९. शिल्पा शेट्टी
शिल्पा बिजनेसम्यानसँग विवाह गरेपछि पनि आफ्नै बिजनेस शुरु गरेकी छन् । शिल्पाको परफ्युम ब्राण्ड एस २ चर्चित छ । उनले केही कम्पनीहरुमा समेत शेयर हालेको बताइन्छ । एजेन्सी